watchOS 9 ayaa soo bandhigtay dib u habeynta batteriga Apple Watch Series 4 iyo 5 | IPhone News
watchOS 9 wuxuu soo bandhigayaa dib u habeynta batteriga Apple Watch Series 4 iyo 5
watchOS 9 ayaa la soo bandhigay macruufka 16 iyo macOS Ventura oo ah furaha furaha ee WWDC22. Tan iyo markaas waxaan horeyba ugu jirnay betas labaad ee horumariyeyaasha dhammaan nidaamyadan hawlgalka. Qaar badan oo ka mid ah sifooyinka la soo bandhigay ayaa hadda diyaar u ah horumariyeyaal waxayna diyaar u noqon doonaan dadweynaha guud marka Apple ay soo saarto betas dadweyne dhowr toddobaad gudahood. Mid ka mid ah novelties of watchOS 9 waa ku darista nidaamka dib u habeynta batteriga ee Apple Watch Series 4 iyo 5. Isaga ayaa mahad leh Qiyaasta nolosha batteriga waxay noqon doontaa mid aad u sax ah marka loo eego watchOS 8.
Taxanaha Apple Watch 4 iyo 5 waxay wanaajin doonaan qiyaasaha nolosha batteriga ee watchOS 9
IOS 15.4 Apple waxay sidoo kale ku dartay nidaamka dib u habeynta batteriga ee iPhone 11. Thanks to nidaamkan qalabku waxa uu awoodaa in uu dib u xisaabiyo oo uu wanaajiyo heerka batteriga marka laga reebo bixinta xogta nolosha batteriga oo sax ah, kaas oo sidoo kale fure u ah marka la tixgelinayo beddelka aaladda ama xitaa batteriga.
Kani waa watchOS 9, cusbooneysiinta weyn ee Apple Watch
Ka dib markii loo cusboonaysiiyay watchOS 9, Apple Watch Series 4 ama Taxanaha 5 ayaa dib u habeyn doona ka dibna si sax ah u qiyaasi doona awoodda batteriga ugu badan.
Isla sidaas oo kale ayaa ku dhici doona watchOS 9. Marka loo eego qoraallada nidaamka cusub ee hawlgalka ka Apple kaas oo ku jira habka beta, Taxanaha Apple Watch 4 iyo 5 ayaa dib u habeyn doona baytarigooda marka ugu horeysa ee ay bilaabaan. Marka cabbirka la sameeyo, watchOS 9 ayaa si sax ah u soo bandhigi doonta qiyaasta awoodda ugu badan, isaga oo u soo dhowaanaya xogta dhabta ah.
Nidaamkan Waxay noqon doontaa mid toos ah isticmaaluhuna wuxuu awoodi doonaa inuu la tashado natiijada kama dambaysta ah, inkasta oo aanu ka warhayn hab-socodka gudaha ee dhacaya. Waxa aan ognahay ayaa ah in geeddi-socodku uu qaadan karo dhowr toddobaad, sidii uu ku sameeyay iOS 15.4 iyo iPhone 11 dhowr bilood ka hor.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » watchOS 9 wuxuu soo bandhigayaa dib u habeynta batteriga Apple Watch Series 4 iyo 5
Hawsha saaxiibadeen waxay ku gaari doontaa Spotify iyada oo loo marayo "Community"
Podcast 13x35: Helida iOS 16 iyo in ka badan